स्यानट्यान्डरमा के हेर्ने: समुद्री, हिमाल, कलात्मक सम्पदा र ग्यास्ट्रोनोमी Absolut यात्रा
तपाईंले सायद सैन्टेन्डरमा के हेर्ने भनेर सोच्नुभएको छ यदि तपाईंले यस क्षेत्रको माध्यमबाट यात्राको योजना बनाउनुभयो भने Cantabria। राजनैतिक र विश्वव्यापी रूपमा, शहर पर्यटन को गर्मी मा विकसित भएको छ किनकि राजाले यसलाई छुट्टी गन्तव्यको रूपमा फैशनेबल बनाए अल्फोन्सो XIII। तर यसको आर्थिक बल धेरै पहिले छ, खास गरी सोह्रौं शताब्दीमा जब यो आगमनको शुरु भयो लानास मार्ग र एकको बन्दरगाहको रूपमा समेकित गरिएको थियो कास्टिल्ला.
यद्यपि उनले एउटा भयrif्कर कष्ट भोगे आगो १ 1941 .१ मा, जसले यसको ऐतिहासिक केन्द्रको राम्रो हिस्सा नष्ट गर्‍यो, त्यहाँ तपाईंले सान्तेन्डरमा देख्नुपर्ने कुरा धेरै छ। थप रूपमा, पहाड राजधानी एक सानो शहर हो जुन तपाईं पैदलमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसले तपाईंलाई असाधारण प्रस्ताव गर्दछ gastronomy। यदि तपाईं स्यानट्यान्डरमा के गर्ने भनेर पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 स्यानट्यान्डरमा के हेर्ने: समुद्री र ऐतिहासिक भवनहरू
1.1 क्याथेड्रल गिर्जाघर अफ अ लेडी अफ एस्प्शन
1.2 पासेओ डे पेरेडा
1.3 मग्दालेना दरबार
1.4 Menéndez Pelayo पुस्तकालय र घर संग्रहालय
1.5 रिवा-हेरेरा दरबारको स्मारक परिसर
1.6 सैन राफेल अस्पताल
1.7 चर्च अफ एनोनेशन एण्ड प्लाजा पोर्टिकाडा
1.8 स्यानट्यान्डरमा अन्य भवनहरू हेर्न
1.9 समुद्र तटहरू, स्यानट्यान्डरमा देख्न पहिलो चीज
1.11 स्यान्टेन्डर को पार्क
1.12 पोर्टो चिको
2 सान्तेन्डरमा के खान गर्ने
3 यो क्यान्टाब्रियन राजधानी जान कहिले उत्तम हुन्छ
4 सान्त्यान्डर कसरी पुग्ने
स्यानट्यान्डरमा के हेर्ने: समुद्री र ऐतिहासिक भवनहरू
क्यान्ट्याब्रियन राजधानी भव्य छ समुद्र तट, धेरै सुन्दर वातावरण र एक महत्त्वपूर्ण स्मारक विरासत त्यो बढ्न बन्द भएको छैन। हामी यसको केहि हाइलाइटहरू हेर्न जाँदैछौं।
क्याथेड्रल गिर्जाघर अफ अ लेडी अफ एस्प्शन
यो प्रभावशाली मन्दिर पुरानोमा १२ औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीचमा बनाइएको थियो पवित्र निकायको अभय, जहाँ तिनीहरू गाडिएका थिए सेन्ट इमेटरियो y सान सेलेडोनियो, शहर को ढाँचा। यो एउटा चर्च हो गथिक माथि उल्लेखित आगोमा यसले यसको खजानाको एक राम्रो हिस्सा हरायो, यद्यपि विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य शुरू गरिए।
यो पनि धेरै छ बारोक चेपल्स जुन फर्नान्डो हेरेरा, जुआन अल्भाराडो र सेबस्टियन डे ला पुएब्लाले बनाए। ती मध्ये एकको चिहान हो Menendez Pelayo, भिक्टोरियो माचो द्वारा। यसको पनि मूल्यवान छ गथिक शैली क्लोस्टर.
पासेओ डे पेरेडा
निस्सन्देह यो शहरको प्रतीक हो। यो लामो पैदल यात्रा हो जुन केन्द्रबाट क्षेत्र तर्फ जान्छ पोर्टोचिको किनार रेखासँग समानान्तर हुँदा यसले खाडीको अद्भुत दृश्य प्रस्ताव गर्दछ। यो परिस्थिति, सँगै यो शहर मा केहि उत्कृष्ट भवनहरु को घर को तथ्य संगै बान्को सान्तांदर मुख्यालय वा स्प्यानिश ट्रान्साटलान्टिक कम्पनीको दरबार, घोषणा गर्न नेतृत्व गरेको छ ऐतिहासिक कलात्मक परिसर.
२० औं शताब्दीको सुरूमा शाही परिवारको बिदाको लागि उनीहरूको छुट्टिको घरमा बस्नको लागि निर्माण गरिएको हो, जुन यसमा अवस्थित छ प्रायद्वीप उही नामको र अगाडि मउरो टापु। त्यसकारण यसको सुन्दर बगैंचाबाट हेराइहरू प्रभावशाली छन्।
यो एक निर्माण हो एक्लेक्टिक शैली यसले अ man्ग्रेजी मन्सेन्सको प्रभावलाई फ्रान्सेली शैली र पहाड बारोक वास्तुकलासँग जोड्दछ। यसको मुख्य भागमा दुई अष्टभुज टावर र एक डबल-सेक्शन सीढी रहेको छ र यो सबै चिनाई ढु and्गा र स्लेटमा बनाइएको छ।
पछि, केही अस्तबलहरू थप गरियो किaअंग्रेजी शहर। यो हालको मुख्यालय हो यूनिवर्सिटी इंटरनेसियनल मेनेन्डेज पेलायो.
Menéndez Pelayo पुस्तकालय र घर संग्रहालय
तपाईलाई पनि थाँहा छ, मार्सेलिनो मेनेन्डेज र पेलेयो उनी सहरमा जन्मेका सबैभन्दा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू मध्ये एक थिए। तसर्थ, यो आश्चर्यजनक छैन कि सान्तेन्डरमा के धेरै हेर्ने छ उहाँसँग सम्बन्धित छ। यो यस भव्य भवनको मामला हो जुन यसको विशाल पुस्तकालय रहेको छ र जुन नायकको परिवारको घरसँगै निर्माण गरिएको थियो।
सम्बन्धित छ ऐतिहासिक शैली महत्त्वपूर्ण हेरेरियन तत्वहरूको साथ। यसको विचित्र एक डबल-सेक्शन सीढीबाट बनेको छ जुन चार ठूलो विन्डोज द्वारा flanked एक तल्लो मुख्य ढोकामा टु .्गिन्छ। बगैंचामा, तपाईं द्वारा बनाईएको विद्वानको मूर्ति पनि देख्न सक्नुहुन्छ मारियानो बेन्लीयुर.
रिवा-हेरेरा दरबारको स्मारक परिसर
सिभिल वास्तुकलाको हिसाबले यो निर्माण शहरको सब भन्दा पुरानो हो, प्रोनिल्लो छरछिमेकमा अवस्थित छ र छ सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति। जटिल मध्यकालीन टावर, पर्खाल र एक सुन्दर बाट बनेको छ पुनर्जागरण हवेली १th औं शताब्दी। उत्तरार्द्धमा यसको फ्याड बाहिर निस्कन्छ, दुई पोर्चाहरूसहितको पोर्टिको र यसको कर्निकेस, आगो र गार्गोइल्सको साथ।
यो Riva-Herrera मा एक होइन, शहर मा मात्र एक मात्र भव्य घर। हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईको दरबारहरूमा जानुहोस् लस पिनारेस र कासा पोम्बोको मार्क्विस। सानो बिर्सन बिना एम्बार्कडेरो दरबार.
सैन राफेल अस्पताल
यो भव्य अदालत भवन नियोक्लासिक यो १ XNUMX औं शताब्दीको अन्तमा पुरानो मर्सी अस्पताल प्रतिस्थापन गर्न निर्माण गरिएको थियो। फाउडका मेहराब बाहिर खडा हुन्छन्, जसले पोर्च बनाउँदछ, र भित्री आँगन वर्ग कोरिडोर सहित। हाल यो मुख्यालय हो क्यान्ट्याब्रियाको संसद.
चर्च अफ एनोनेशन एण्ड प्लाजा पोर्टिकाडा
पहिलो, घोषणा गरियो सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति, को राम्रो अभिव्यक्ति हो पुनर्जागरण वास्तुकला क्यान्ट्याब्रियामा। यसको पेडेमेन्ट र अर्धवृत्ताकार आर्क यसको एफएड बाहिर उभिन्छ, साथ साथै भित्रै एक लालटिनको साथ गुम्बज।
सन्दर्भमा पोर्टिकाडा स्क्वायर वा पेद्रो भेलार्डे (स्वतन्त्रताको युद्धका क्यान्टाब्रियन नायक), तपाईंले सेन्टेन्डरमा देख्नु पर्ने अर्को ठाउँहरू हुन्। यो भय you्कर आगो पछि बनाइएको थियो जुन हामीले तपाईंलाई भनिसक्यौं तर यो प्रतिक्रिया दिन्छ नियोक्लासिकल हेरेरियन शैली यस क्षेत्रमा रहेको पुरानो चलनहरूबाट प्रेरित भएको कारण।
स्यानट्यान्डरमा अन्य भवनहरू हेर्न
शहर अझै पनी धेरै अन्य भवनहरू छन् जुन तपाईंको भ्रमणको लागि योग्य छ। ती मध्ये, हालसालै खोलिएको बोटन केन्द्र, एक आश्चर्यजनक र साहसी निर्माण रेन्जो पियानो द्वारा डिजाइन; को सान्ता क्रुजका गरीब क्लेयर आमाहरूको कभेन्ट, सत्रौं शताब्दीमा बनाइएको र जुन हो सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति; the पूर्वी बजार, १1842२ मा उद्घाटन; को चर्चहरु सेन्ट लूसिया y सान फ्रान्सिस्को र Corbanera महल, जो पनि छ सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति.
समुद्र तटहरू, स्यानट्यान्डरमा देख्न पहिलो चीज
तपाईंसँग सानटान्डरमा शानदार समुद्रहरू छन् जस्तै लस पेलीग्रोस, एल क्यामेलो वा लस मोलिन्युकोस। तर सबैभन्दा लोकप्रिय छ त्यो सार्डिनरोको हो, जो एक तटीय क्षेत्र फैलन्छ जुन रीना भिक्टोरिया एवेन्यूमा सुरू हुन्छ। वास्तविकतामा, यो दुई समुद्री किनारहरू हो जुन ज्वार उठ्दा सँगै आउँछ, लामो बालुवाको गठन गर्दछ।
कुनै श doubt्का बिना, यो तपाइँको क्यान्टाब्रियन समुद्री पानीको आनन्द लिनको लागि उत्तम ठाउँ हो। साथै, समुद्री किनारको लामो प्रोमेनेडमा तपाईंले भवनहरू जत्तिकै सुन्दर देख्न सक्नुहुन्छ शाही होटल वा त्यो भव्य क्यासिनो, १a१ in मा निर्मित आधुनिकतावादी टचहरूको साथमा एक सुन्दर नियोक्लासिकल निर्माण। यो सबै बिर्सिन बिना Piquío उद्यानहरू यसको सुन्दर दृष्टिकोण र मेसोन्स पार्क.
बढी जिज्ञासु हो पन्तल बीचयद्यपि यो स्याटान्डरमा कडा रूपमा छैन। यदि तपाइँ एक लिनुहुन्छ स्फटिक, डु boats्गा जुन एम्बाकार्डेरो दरबारबाट छुट्छ, तपाईं क्षेत्रको बालुवाको यस भागमा पुग्न सक्नुहुनेछ Somo। त्यहाँ दुई र आधा किलोमिटर समुद्र तटको दुबै किनारमा क्यान्टाब्रियन र खाडीको शानदार दृश्यहरू छन्।
हामीले तपाईंलाई बोटन सेन्टरको बारेमा बताइसकेका छौं, जसमा विभिन्न कलात्मक विषयहरूमा समर्पित एक प्रभावशाली प्रदर्शनी कोठा छ। तर तपाई अन्य संग्रहालयहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, क्यान्टाब्रियन सागर o पानी संग एक। जे होस्, ती सबैको बीचमा, त्यहाँ दुई छन् जुन तपाईले सेन्ट्यान्डरमा देख्नुपर्नेछ।
ग्रान क्यासिनो डे सान्तांदर
पहिलो हो प्रागैतिहासिक र क्यान्टाब्रिया को पुरातत्व संग्रहालय, जुन हाल पूर्व बजार भवनमा अवस्थित छ। यो कला को एक संग्रह हो सुपीरियर प्यालेओलिथिक संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। तर अन्य कालखण्डबाट पनि जस्तै चलकोलिथिक वा काँसाको युग र अझ नयाँ।
वास्तवमा, उनको दुई गहनाहरू हुन् Patera de Otañes, रोमन समयमा सुन र चाँदी को बनाएको प्लेट, र तथाकथित अम्बोजोको उच्च मध्यकालीन खजाना, ११ औं र १२ औं शताब्दीका क्यास्टिलियन र अर्गोनी सिक्काहरूको सेट।
दोस्रो को रूपमा, यो छ स्यानट्यान्डर र क्यान्टाब्रियाको आधुनिक र समकालीन कलाको संग्रहालय, ललित कला को पूर्व संग्रहालय। यो Menéndez Pelayo लाइब्रेरी को रूप मा उही भवन मा स्थित छ र चित्रकला र मूर्तिकला को एक महत्वपूर्ण संग्रह को संरक्षण गर्दछ जुन १th औं देखि २० औं शताब्दी को छ। विशेष महत्त्व इटालियन, फ्लेमिश र स्पेनिश स्कूलहरूको काम हो।
स्यान्टेन्डर को पार्क
क्यान्टाब्रियन शहरसँग धेरै हरियो क्षेत्रहरू छन्। केही, जस्तै Piqu gardenso बगैचा वा मग्दालेना बगैंचा, हामी तपाईंलाई पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं। तर ती मध्येका बाहिर खडा छ लास लिलास एट्लान्टिक पार्क, उही नामको उपत्यकामा अवस्थित छ। यसले करीव एघार हेक्टर क्षेत्र को क्षेत्र कवच गर्दछ जुन वनस्पति र जीव जन्तुको ठूलो सम्पत्ति रहेको छ र यसमा साइकल लेन र अन्य खेलकुद पूर्वाधार छन्। यो हरियो ठाउँको ठीक अगाडि हो सान्तान्दर प्रदर्शनी केन्द्र। र, यदि तपाईंलाई फुटबल मनपर्दछ, तपाईंसँग पनि छ एल सार्डिनरोको नयाँ स्टेडियम, जहाँ रियल रेसि Club क्लब खेल्छ।
समाप्त गर्नका लागि हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं पोर्टो चिको नजिकैको भ्रमण गर्नुहोस्, एक पटक शहरको मर्नेर बराबर उत्कृष्टता र यसले आज घरहरू बनाएको छ। फुर्सत पोर्ट, खेल पोर्ट। यो पनि एक उत्तम हो तपस र पेय क्षेत्रहरू शहरबाट, विशेष गरी सडकहरू Hernán Cortes, जुआन डे ला कोसा, सान्ता लुसिया वा प्लाजा डे Caadío बाट।
सान्तेन्डरमा के खान गर्ने
हामीले सान्तेन्डरमा देख्न सक्ने सबै चीजको बारेमा हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेका छौं। तर हामीले भर्खर प्युर्टो चिकोको बारेमा तपाईंलाई के भन्यौं त्यसले शहरको भव्य ग्यास्ट्रोनोमीको बारेमा बताउँछ। यसैले तपाईले यति धेरै यात्रा पछि बल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तटीय शहर भएको कारण, यो तार्किक छ कि सान्तेन्डरसँग शानदार छ क्यान्टाब्रियन सागरबाट माछा र शेलफिस। तर यो समुदायको राजधानी पनि हो जहाँ पशुधन र बगैचा उत्पादनहरू प्रशस्त छन्। यी सबैको लागि हामी तपाईंलाई भन्न सक्दछौं कि सान्तेन्डरको ग्यास्ट्रोनोमी एक उत्तम छ समुद्र र हिमालहरूको सहजीवन.
पहिलो को रूपमा, यो बनाएको छ सन्तोआबाट एन्कोभिस, विश्वभरि प्रसिद्ध। यो पनि नेतृत्व गरेको छ स्क्विड धेरै खपत भान्सा मध्ये एक हो। र त्यस्तै एउटा नुस्खाको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ जुन टुनालाई यसको आधारका रूपमा लिन्छ: यो भाँडोबास्क मारमिताकोको पहिलो भतिजा भाई तर जो खुर्सानीको रोटीको अंश दिन्छन् र यसलाई पनि चिनिन्छ sorropotún.
मासु को रूप मा, तपाई सान्तेन्डर मा भव्य को भाँडा कोशिस गर्नु पर्छ क्यान्टाब्रियन गोमांस, भेडा, जंगली सुअर र हिरण। ती सबै बिभिन्न तरिकाहरूबाट तयार छन् तर उदाहरणका लागि तपाईले ट्रिभिसो पनीरको साथमा गोमांसको टेंडरलिनको अर्डर गर्नुपर्छ।
बढी बलवान छ माउन्टेन स्ट्यू, जसमा सेतो सिमी र कोलार्ड सागसहितको कम्प्याo्गो छ, अर्थात चोरिजो, रगत सॉसेज, बेकन र मरीनेट रिबहरू। यसको एक रूप हो लेबनिएगो स्टूयद्यपि यो लाइबानाको हिमाली क्षेत्रको अधिक विशिष्ट छ। यो पनीस पोटाबाट चिसो र आलुको साथ बन्दकोबीले प्रतिस्थापन गर्दछ।
अन्तमा, डेसर्टको बारेमा, सबै क्यान्ट्याब्रियासँग शानदार छ चीज। तर ती मध्ये तीन जनाको उत्पत्ति पदनाम: क्रीमको हो, बेजेस-ट्रेस्विसो र लाइबाना उपत्यकाको तथाकथित क्वेकुस। तर, यदि तपाई मिठो कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने तपाईले प्रयास गर्नु पर्छ sobaos pasiegos र, सबै भन्दा माथि, Quesada Pasiega, जो गाईको दुध, माखन, पीठो, चिनी, अण्डाहरू र ग्रेटेड दालचिनी वा निम्बूको साथ बनेको छ।
तपाईंको खाना समाप्त गर्न, तपाईं एक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ पोट्स पोमेस, जसमा उच्च रक्सी सामग्री रहेको छ तर थोरै मात्रामा लिन्छ। तपाईंसँग मह र जडीबुटीहरू जस्तो विभिन्न स्वादहरूमा तिनीहरू छन्, तर ती सबै स्वादिष्ट छन्।
यो क्यान्टाब्रियन राजधानी जान कहिले उत्तम हुन्छ
स्यान्टेन्डरमा के हेर्ने जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ तपाईंलाई यो भ्रमणको उत्तम समय थाहा छ। कुनै श at्का बिना यो छ गर्मी, जब मौसम तातो नहुँदा तातो छ र शहर एनिमेसनको साथ हलचल गर्छ। थप रूपमा, जुलाई २ around वरिपरि, त्यहाँ छन् parties त्यो क्षेत्रीय पर्यटक रुचि को हो।
जहाँसम्म, यदि तपाईं ती मध्ये एक जो अधिक शान्ति खोज्नुहुन्छ, वसन्त यो पनि सान्तेन्दर को यात्रा गर्न को लागी एक राम्रो समय हो। मौसम रमाइलो छ र ग्रीष्मकालमा त्यहाँ धेरै आगन्तुकहरू छैनन्।
सान्त्यान्डर कसरी पुग्ने
क्यान्ट्याब्रिया को राजधानी छ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। यो Severiano Ballesteros को नाम वहन गर्दछ र छिमेकको शहर मा स्थित छ क्यामानगोसान्तेन्डरबाट केवल छ किलोमिटर। यसमा पुग्नको लागि तपाईसँग धेरै लाइनहरू छन् शहर बसहरु.
यही यातायात साधनले क्यान्ट्याब्रियाको राजधानी स्पेनको मुख्य शहरहरूसँग जोड्दछ। तर, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ रेलवे स्यानट्यान्डर पुग्न। दुबैबाट रेलहरू छन् मैड्रिड बिलबाओ र ओभिडो जस्तो कि तपाईंलाई उही शहरमा छोड्नुहोस्।
अन्तमा, यदि तपाईं आफ्नै कारमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, पश्चिमबाट पहुँच सडक हो S-20 राजमार्ग, पूर्वबाट तपाईं द्वारा आइपुग्नुपर्दा एस-10, यदि तपाईं दक्षिणबाट आउनुभयो भने। एक पटक सहरमा र यदि तपाईं व्यायाम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग नगरपालिका सेवा छ साइकल चलाउन.
अन्त्यमा, हामीले सान्तेन्डरमा के हेर्ने र क्यान्ट्याब्रियन शहरले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने धेरै गतिविधिहरू वर्णन गरेका छौं। यो छ स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक र यसमा सबै थोकहरू छन्: प्रकृति र समुद्र तटहरू, स्मारक सम्पदा, उत्कृष्ट ग्यास्ट्रोनमी र स्वागतयोग्य र मैत्री व्यक्तिहरू। तपाईलाई यो भ्रमण गरेको जस्तो लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » स्यानट्यान्डरमा के हेर्ने